(Waxaa laga soo toosiyay Kosovo)
Qaybsiga (FY2005/2006) 30.0 (medium / 121)
Kosofo ama Jamhuuriyadda Kosofo, (Af-Albanian: Republika e Kosovës; Af-Serbian: Република Косово). Waa dawlad iskeed ugu dhawaaqday xagjiriinta Albaniyiinta (Islaamka). Tan iyo markii lagu dhawaaqay madax-bannaanida Serbia 17-kii Febraayo 2008 illaa iyo maanta 17 Wadamadu waxay ka noqdeen aqoonsiga Kosovo. Waa muran iyo qayb ahaan loo aqoonsan yahay inay tahay dhulkii Jamhuuriyadda Serbia. Xilligan, Jamhuuriyadda Kosovo waxaa aqoonsan 93 ka mid ah 193 xubnood oo UN ka ah. Dowladda Serbia uma aqoonsana Kosovo inay tahay dowlad madaxbanaan, laakiin waxay bilowday xiriir caadi ah oo ay la laheyd dowlada Kosovo, si kastaba ha noqotee, si waafaqsan Heshiiska Brussels. Heshiiska ayaa la soo gabagabeeyey 19 Abriil 2013.
Dhacdooyinka muranka dhaliyay
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya hay'adaha caalamiga ah, xukunka sharciga ee Kosovo wuxuu ku jiraa xaalad liidata, waxaa ku jira tahriibinta dadka, daroogada, hubka. Intii lagu jiray dagaalkii 1999 iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii, waxaa la Serbs waa la afduubay ka dibna waxaa loo qaaday Albania, halkaas oo xubnahooda gudaha laga soo qaaday jidhkooda laguna iibiyey si sharci darro ah adduunka. Intii lagu jiray dagaalkii Kosovo, dadka rayidka ah waxaa si argaggixiso loo soo weeraray, la kufsaday loona dilay. Ciidanka xoreynta Kosovo wuxuu ahaa gooni isu taaga Albania iyo koox argagixiso ah oo raadinayay kala go'ida Kosovo Jamhuuriyadda Federaalka ee Yugoslavia iyo Serbia inta lagu gudajiray 1990-yadii iyo ugu dambayntii abuuritaanka Greater Albania iyadoo jiritaanka tirada badan ee Albaniyiinta gobolka. Taliyayaasha iyo saraakiisha ciidammada waxay ahaayeen: Hashim Thaçi, Agim Çeku, Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Florim Ejupi, Sami Lushtaku, Jakup Krasniqi, Naim Maloku, Sadik Cuflaj iyo dambiilayaal kale oo badan iyo gacankudhiiglayaal.
dadka: -ayaga oo damaantooda: 1 859 203 (2014) -albanian: 88 % -serbian: 7 % -muslimiin: 1,7 % -turkish: 1 %
Reparticion etnica en Kosova en 2005, segon l'OSCE
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosofo&oldid=214762"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 00:40.